hoy Joel Andriamandranto, minisitry ny fizahan-tany. Araka ny nambarany hatrany efa mametraka paikady amin`ny fampiroboroboina ny fizahan-tany anatiny ny ministera mialohan`ny fisian` ny fanokafan` ny fivezivezena na an-tanety na ana habakabaka. Efa nisy ihany koa ny fanadihadiana momba ny fizahan-tany anatiny natao tamin` ny taona 2016 ka fampiharana no atao amin` izao. “60 hatramin` ny 70%n` ny mpizahan-tany anaty dia miala amin` ireo faritra tsy azo hivezivezena ireo. Efa fantatra koa ny toerana teny andehanan` ireo mpizahan-tany ireo eto Madagasikara.”Ankilany misy ny fihaoanana eo amin` ny mpandraharaha misehatra amin` ny fizahan-tany ny amin` ny hanamboarana fotodrafitrasa zakan` ny Malagasy rehetra izay maniry ny hanatanteraka fizahan-tany anatiny. Raha nambaran` ny minisitra dia lafo ny fidirana amin` ireny toerana misy ireny fotodrafitrasa ireny izay lasa sakana amin` ny fampiroboroboana ity sehatra ity.